अन्तत: आपूर्ति मन्त्रीले देखाए आँट, जनता ठग्ने कम्पनी लक्ष्मी हुन्डाईमा आपूर्ति मन्त्रालयको छापा !
ARCHIVE, SPECIAL » अन्तत: आपूर्ति मन्त्रीले देखाए आँट, जनता ठग्ने कम्पनी लक्ष्मी हुन्डाईमा आपूर्ति मन्त्रालयको छापा !
काठमाडौँ- हुन्डाईका गाडीमा कालोबजारी ऐन विपरित नाफा कमाएर जनता चुस्न पल्केको लक्ष्मी हुन्डाईमा आपूर्ति मन्त्रालयले छापा मारेको छ । पहिल्लो समय आपूर्ति मन्त्रीले आफु निकटका र ठुला व्यापारीहरुकहाँ छापा नमारेको भन्ने आरोप लागिरहेका बेला अर्थ सरोकार डटकमले आपूर्तिमन्त्रीज्यू, एउटै गाडीमा २५ लाख बढी कुम्ल्याउने हुन्डाईलाईचाहिं कहिले कारवाही हुन्छ ? शीर्षकको सामाग्री प्रकाशन गरेपछि अन्तत: आपूर्ति मन्त्रालयले उक्त कम्पनीमा छापा मारेको हो । लक्ष्मी हुन्डाईका कर्तुतबारे यसअघि पनि अर्थ सरोकार डटकमले थुप्रै सामग्रीहरु प्रकाशीत गरिसकेको छ ।
यद्यपी ठुलो कम्पनी भएकाले यो छापा मराई औपचारिकताका लागि मात्र हुन सक्ने आशंका धेरैले गरेका छन् । आफुलाई कानुनमाथि छु भन्ने दम्भ देखाउनेहरुको आपूर्ति मन्त्रालयसँग पनि सेटीङ हुन हुन्छ भन्ने शंका धेरैले गरेका छन् । यद्यपी आपूर्ति मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुले भने दोषी ठहरिए कोहि पनि कारवाहीबाट उम्कन नसक्ने बताएका छन् ।
अनुगमन टोलीका संयोजक लोक्बाहादुर कार्कीका अनुसार खरिद मूल्य र विक्री मूल्यमा अन्तर देखिएको आशंकामा कम्पनीको नक्सालस्थित कार्यालयमा छापा मारिएको हो । 'खरिद र विक्री मूल्यमा ठुलो अन्तर आएको भन्ने कुरा बाहिर आएपछी छापा मारिएको हो । दोषी ठहरिए कोहि पनि उम्कन पाउँदैन' उनले भने ।
हुन्डाई कम्पनीको गाडी बेच्ने लक्ष्मी हुन्डाईले कालोबजारी ऐन विपरित गाडी बेच्दा अकुत फाइदा कमाउने गरेको छ । पैसाकै पावरमा कम्पनीका कर्मचारीहरुले खुलेआम रुपमा आफुहरु जनता ठग्ने अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् । कम्पनीले एउटा गाडी मा नै २५ लाख रुपैयाँसम्म नाफा कमाउने गरेको छ । तर कम्पनीले नेपालको कानुन विपरित काम गर्दा पनि अनेकौं कुतर्क दिएर आपूर्ति मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुलाई प्रभावमा पार्न खोजेको बुझिएको छ । अव यो प्रकरणमा मन्त्रालयले उक्त कम्पनीलाई के गर्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
प्रकाशित : Friday, September 22, 2017